निमालाई दुई–दुई पटक सजाय – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
निमालाई दुई–दुई पटक सजाय
२०७१ बैशाख १९, शुक्रबार ०३:५० गते
कसरा । मूल घर तिब्बत भए पनि काठमाडौँ बस्दै आएका ताञ्जिङ निमा लामा चितवन निकुञ्ज प्रशासनलाई आफू मरेको भन्ने सबुद जुटाएर आफूविरूद्धको मुद्दा नै बन्द गराउने व्यक्ति हुन् । उनै निमा दोस्रो पटक समातिँदा सजायमाथि सजाय पाउन थालेका छन् ।
चितवन निकुञ्जले निमालाई गएको चैत्र २७ गते १३ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिबाना गरेकोे छ । विसं. २०६८ साल कात्तिकमा समातिएका निमालाई यसअघि पनि गएको असोज १६ मा भएको फैसलामा १५ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिबाना भएको थियो ।
तान्जिङ निमा गैंडा मुद्दामा ६० साल वैशाखमा पनि समातिएर साधारण तारेखमा छुटेका थिए । तर उनका आफन्तले निमा मरेको भन्ने भारत सिलगढीको एउटा मेडिकलको कागजपत्र पेस गरेपछि तान्जिङको मुद्दा बन्द भएको थियो । उनै तान्जिङ विसं. २०६८ सालको कात्तिकमा समातिएका हुन् ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी टीकाराम पौडेलले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यो पटक स्थायी ठेगना तिव्बत भई काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ बौद्ध फूलबारी बस्ने निमासहित राते भन्ने हिसी लामा र थप दुई नेपालीलाई पनि सजाय भएको छ ।
चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरले गरेको फैसला अनुसार हिसीलाई ११ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिबाना भएको छ । चितवन निकुञ्जसँग सिमाना जोडिएको भारत बिहारको वाल्मीकि टाइगर रिजर्वमा गैंडा मारेर खाग बिक्री व्यवसाय गरेको आरोपमा उनीहरुलाई यो पटक सजाय भएको हो ।
निकुञ्जले दिएको जानकारीअनुसार प्युठान लुंगका महेश्वर भनिने खिमबहादुर केसी र नवलपरासी त्रिवेणी सुस्ता गाविसका खुमराज थापा गिरीलाई पनि सजाय भएको हो । केसीलाई ११ वर्ष कैद र एक लाख रूपैयाँ जरिबाना तथा गिरीलाई १ वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिबाना भएको छ ।
गैंडा अन्यत्र मारे पनि व्यापार नेपालमा गरेकाले सजाय चितवन निकुञ्जले सुनाएको हो । चितवन निकुञ्जले केसीलाई नगदसहित त्रिवेणीबाट विसं. २०६८ सालको असोज २९ मा समाएको थियो । गिरी सोही वर्षको कात्तिक २७ गते समातिएका थिए । केसी र गिरीलाई चैत्र २७ गते थप अर्को मुद्दामा पनि सजाय भएको छ ।
चितवन निकुञ्जले तान्जिङ, हिसी र जिसीलाई गएको असोज १६ मा पनि कैद र जरिबानाको फैसला गरेको थियो । उनीहरु गैंडा मार्ने सिकारीदेखि खाग विदेश लैजाने गिरोहका सदस्यहरु भएको निकुञ्जको दावी रहँदै आएको छ । गैंडाको खाग ३५ लाख रूपैयाँसम्म बिक्री हुने तथ्य पक्राउ परेको यही गिरोहबाट उजागार भएको थियो ।
गैंडा मारेर खाग बिक्री गर्ने काममा संलग्न भएको पुष्टि भए ५० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँ जरिबाना या पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद या कैद र जरिबाना दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।